१८ वर्षदेखि भात नखाएका राजेश हमालको यस्तो छ रहस्य ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»चलचित्र»१८ वर्षदेखि भात नखाएका राजेश हमालको यस्तो छ रहस्य !
१८ वर्षदेखि भात नखाएका राजेश हमालको यस्तो छ रहस्य !
By रिता घिसिंग on ३० पुष २०७४, आईतवार ०१:३८ चलचित्र
हमालको लाइफस्टाइलका गोप्य पाटा खुल्दै थिए । उनी हतारो महसुस पनि गरिरहेका थिए । तर, म अझै खोतल्न जोड लगाइरहेको थिएँ । हमाल र दीपेन्द्रका कुरा सकिएपछि समय ‘होल्ड’ हुन नदिने कोसिस गरिरहेको थिएँ । ‘दाइले दिउँसोचाहिँ के खानुहुन्छ त ?’ मैले सोधेँ । उनले भने, ‘दिनभरमा तीनदेखि पाँचवटा अन्डा खान्छु, पहेँलो भाग फालेर । मकै, भटमासलगायत मिसाएर बनाएको सातु, हल्का काजु र किसमिस नियमित खान्छु ।’ तर, सुटिङका वेला पनि यो सम्भव हुन्छ त ? प्रश्न खस्न नपाउँदै दीपेन्द्र बोले, ‘सुटिङमा निस्किँदा दाइले खाने सबै कुरा घरबाटै तयार गरेर लगिन्छ, पानीसमेत ।’
हमाल हतारिएपछि पनि १५ मिनेटसम्म गफ तन्काएर मैले रोकेको थिएँ । अब, एउटै जवाफ लिएर बिदाइ गर्ने सुरमा म पुगेँ । खानामा यति धेरै ‘कन्सस’ तपाईं पिउने सवालमा दिलदार हुनुहुन्छ ? लामो हाँसो हाँस्दै हमालले दिलै खोलेर सुनाए, ‘हो म पिउँथेँ, युगदेखि युगसम्ममा खेल्नुभन्दा अघि गज्जबले पिउँथेँ । तर, त्यसपछि भने चटक्कै छोडेको हुँ । मद्यपान मात्रै मोइन, धूम्रपान, सुर्ती र पान सेवन पनि पूर्ण रूपमा त्यागिसकेको छु ।’ रेस्टुरेन्टको बसाइ टुंगियो, अर्को भेटमा अर्को कुराकानी गर्ने वाचासहित ।